प्रिन्स्टनको विल्सन स्कूल द्वारा बुलार्ड पुरस्कारबाट सम्मानित
José Quiñonez मा अप्रील 20, 2016 द्वारा लिखित।
अप्रिल9मा, प्रिन्स्टनको वुड्रो विल्सन स्कूलका र Color्गका विद्यार्थी र रंग विद्यार्थीहरूले मलाई एडवर्ड पी। बुलार्ड पुरस्कारबाट सम्मानित गरे। म हार्दिक आभारी छु, र यो सन्देश मेरा साथीहरु संग साझा।
धेरै धेरै धन्यबाद। यसको अर्थ यो पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि ठूलो सम्झौता हो।
मलाई याद छ १ 1996 1996 in मा दोस्रो समोशियमको आयोजन।
त्यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनेहरूको संख्या आजको जत्तिकै राम्रो नहुन सक्छ। तर मलाई याद छ हाम्रो व्यस्त विद्यार्थी जीवनबाट पछि हट्ने र पूर्व विद्यार्थीहरूसँग भेट्ने - उनीहरूको कथाहरू सुन्न, उनीहरूको अनुभवहरूबाट सिक्न, र विल्सनमा आफ्नै अनुभवहरूको बारेमा केही दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सक्ने अद्भुत अवसरमा मैले उर्जा र उत्साह महसुस गरेको छु। स्कूल
र अब हामी यहाँ छौं, २० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै विद्यार्थी र रंग को पूर्व छात्र सँगै आउँदै र त्यसका लागि हामी एड बुलार्ड र जेफ्री प्रीतो र जोन टेम्पलटन र सबै एमपीए विद्यार्थीहरू हप्ताको अन्तमा आयोजित गर्ने तिनीहरूको सपना र कडा मेहनतको लागि ठूलो कृतज्ञता जाहेर गर्दछौं जुन आज हामीलाई यहाँ प्राप्त भयो।
यसको लगत्तै मैले रेनाटो रोचा र गिलबर्ट कोलिन्सको बारेमा फोन गरे बुलार्ड पुरस्कार, म यहाँ मेरा अनुभवहरूमा प्रतिबिम्बित गर्दछु र उनीहरूले कसरी मेरो करियर र अन्ततः मेरो जीवनलाई आकार दिए।
धन्यबाद, मैले सबै दर्दनाक र निद्रा नभएको रातहरू बिर्सन को लागी econ समस्या सेट मा काम गर्न वा पाँच पृष्ठ नीति मेमो लेख्न वा यो वा त्यो परीक्षाको लागि क्र्यामिंग गर्नबाट सक्षम भयो। म साँच्चिकै ठूलो आभारी छु कि मेरो मस्तिष्कले ती सबै सम्झनाहरू मेटाउन सक्षम भयो ताकि म सबै राम्रो चीजहरूमा ध्यान दिन सक्थें।
म निश्चित छु कि यस कोठामा सबै विद्यार्थीहरूले नै ठीक भन्न सक्दछन्, हैन? ठिक छ - म आफ्नै लागि बोल्छु।
तर पहिले आज म तल बाउलमा गएँ - र पहिलो पटक म घबराइनँ। मेरो मुटुको धडकन निराश भएन, मेरो खुट्टा अचेत भएन। वास्तवमा २० बर्ष पछि म बस बस्न र प्रिन्स्टनमा भएकोमा रमाइलो गर्न सक्षम भएँ। (हो। यसले यो लिन मलाई लामो समय लाग्यो।)
मेरो जीवनमा फिर्ता सोच्दै, म यसमा मेरो हालको कामको धेरै ट्रेस गर्न सक्षम भएँ Mission Asset Fund मैले यहाँ विल्सन स्कूलमा सिकेका कुराको लागि।
उदाहरणका लागि प्रोफेसर उवे रेनहार्ड, उनले वित्तीय बजारमा सिकारी ndणदाताहरूको शिकार हुने व्यक्तिहरूको भयावह अन्यायप्रति मेरो आँखा खोले। उसको कक्षा वित्तीय व्यवस्थापनको बारेमा थियो जुन थोरै बोरिंग र ड्राई थियो। तर उसको सूक्ष्म तरिकामा, उनले आफ्ना लेक्चर्समा कथाहरू घुसाउँथे कसरी ndणदाताहरूले termsण सर्तहरूमा थप शुल्क र लागतहरूको साथ loadण लिने शर्तहरूमा हेरफेर गर्दछन्। मलाई याद छ कि मानिसहरुलाई चीराउन को लागी कति सहज थियो - र क्रोधित छ कि ndणदाताहरु जनताको कडा कमाएको पैसा दण्डहीनताको साथ लिनबाट पछि हट्न सक्छन्।
रेनहार्डको कथाहरूले मलाई वित्तीय सुस्त नभएर सामाजिक न्यायको मुद्दाको रूपमा हेर्न मद्दत पुर्‍यायो जसले भौतिक रूपमा मानिसहरुको जीवन सुधार गर्न सक्दछ।
र त्यहाँ प्राध्यापक अलेजेन्ड्रो पोर्टेस छन्। उनले मलाई एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाए जुन एउटा वास्तवमा १ टीटी T टी को आधारशिला हो, जुन हामीले १ टीटी T टीमा कडा परिश्रम गर्ने परिवारहरूलाई तिनीहरूको क्रेडिट बनाउन र सुधार गर्न मद्दत गर्दछौं।
पोर्ट्सले मलाई अनौपचारिक रूपमा हुने अविश्वसनीय आर्थिक गतिविधि हेर्न र त्यसको कदर गर्न सिकायो।
हामी यसलाई सारा संसारमा देख्छौं। सडक विक्रेता व्यस्त सडक कुनामा टमालहरू बेच्दै। वा दिन मजदुर अनौठो काम गरीरहेको छ।
उनले हामीलाई देखाए कि सडक विक्रेताहरू के गर्छन्, आर्थिक गतिविधि तिनीहरूले अनौपचारिक अर्थव्यवस्थामा उत्पन्न गर्दछन् - अदृश्य हुँदा पनि यो औपचारिक अर्थव्यवस्थामा हुने आर्थिक गतिविधिसँग मिल्दोजुल्दो छ। होइन भन्दा कमहोईन आपराधिकहोईन अवर, तर उस्तै - केवल भिन्नताले औपचारिक अर्थव्यवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरूको कानून र नियमहरू छन् सुरक्षा र सुरक्षित गर्न र उनीहरूलाई व्यापक आर्थिक प्रणालीमा देखिने बनाउन।
मैले यो विचार सिर्जना गर्न प्रयोग गरें Lending Circles.
हाम्रो ग्राहकहरू - ठूलो रूपमा अप्रबन्धित, कम आय ल्याटिनो आप्रवासीहरू - समूहमा एक अर्काबाट ndण दिन र bण लिनको लागि एक साथ आउने समय-सम्मानित परम्परा छ। मेक्सिकोमा, यी टान्डाहरू वा कुन्डिनाहरू भनेर चिनिन्छन्, र तिनीहरू विश्वभरि धेरै, धेरै फरक नामहरू द्वारा जान्छन्। यी loansण अनौपचारिक छन्, ठूलो मा भरोसा मा आधारित छ।
तर कसैलाई पनि वास्तवमा उनीहरूको बारेमा थाहा छैन सम्मिलित मानिसहरू बाहेक। कसैलाई पनि थाहा छैन कि सहभागीहरूले वास्तवमा यी दायित्वहरू पहिले केहि भन्दा पहिले तिर्छन्। वास्तवमा, वित्तीय उद्योगले कहिल्यै यो तथ्यलाई सराहना गरेको छैन कि टन्डाहरू एक असाधारण वित्तीय वाहन हो - सहभागीहरूलाई उनीहरूको जीवनमा तीव्र आय उतार-चढाव प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यो किन हो? किनकि टाण्डाहरू अनौपचारिक हुन्छन्, वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर लिइन्छ।
तिनीहरू अदृश्य हुन्छन्। तर एमएएफमा हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्‍यौं।
हामीले व्यक्तिलाई प्रोमिसरी नोटमा हस्ताक्षर गरेर, सेवा loansणको लागि र मुख्य क्रेडिट ब्यूरो, विशेषज्ञ, ट्रान्सयूनियन र इक्विफ्याक्सलाई भुक्तान गतिविधि रिपोर्ट गर्न अनुमति दिदै यो गतिविधिलाई देख्नको लागि एउटा प्रक्रिया सिर्जना गरेका छौं। र यसैले हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई क्रेडिट इतिहास सुरू गर्न र तिनीहरूको क्रेडिट स्कोर सुधार गर्न मद्दत गरिरहेका छौं।
कार्यक्रम काम गर्दछ। २०१ 2014 मा, क्यालिफोर्नियामा सरकार एक कानूनमा हस्ताक्षर गरे राम्रोको लागि एक शक्तिको रूपमा उधार सर्कलहरूलाई पहिचान गर्दै। त्यसोभए, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ - र म यो सह साथी नीति मान्छेले भरिएको कोठामा भन्न सक्दछु - कानूनमा कानून बनाइएको बिल पाउनु एकदमै राम्रो छ। म उत्साहित थिए।
यो काम गरेकोमा म आफैंमा गर्व गर्थें!
म यो घटेको बेलामा पतंगको रूपमा माथि उडिरहेको थिएँ। तर समयमा मैले महसुस गरे कि यो उपलब्धि कुनै दुर्घटना होइन। तपाईले देख्नु भयो, म यसको उत्पादन हुँ सार्वजनिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला (पीपीआईए) कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा रंगका विद्यार्थीहरूको संख्या बढाउन समर्पित एक कार्यक्रम।
मैले यहाँ मेरो जूनियर ग्रीष्मकालीन संस्थान, विल्सन स्कूलमा १ 199 Institute in मा गरें। र त्यो अनुभव र समर्थन र मैले भेटेका मानिसहरूका कारण मैले स्कूलमा पूर्णकालिन विद्यार्थीको रूपमा देख्न पाए, MPA पाएँ र एउटा भवन बनाएँ। सार्वजनिक सेवा मा क्यारियर।
यो कुनै दुर्घटना थिएन। म ठ्याक्कै गरिरहेको छु जुन यो कार्यक्रम पूरा गर्न डिजाइन गरिएको थियो।
वर्षौंको बखत, पीपीआईए कार्यक्रमले सार्वजनिक सेवामा काम गर्दै रंगका पेशेवरहरूको अविश्वसनीय केडर बनाएको छ। अति उत्तम। हामी अहिले यो कोठामा देख्न सक्छौं। वरिपरि हेर।
सुन्दर र प्रतिभाशाली र भावुक मानिसहरूले भरिएको कोठा देखेर यो अविश्वसनीय हुन्छ कि उनीहरू आफ्नो क्यारियर - आफ्नो जीवन - सार्वजनिक सेवामा समर्पण गर्छन्। रंगको आधा MPA विद्यार्थीहरू पीपीआई पाइपलाइन मार्फत आउँछन्।
तर जब तपाईं एउटा राष्ट्रको रूपमा हामीले सामना गर्ने विशाल समस्याहरू विचार गर्नुहुन्छ: हाम्रो संस्था र नेताहरूमा सार्वजनिक विश्वासको कमीबाट; आयबाट शैक्षिक अवसरहरूको लागि भय ine्कर असमानताहरू; निर्वाचन प्रक्रियाबाट लाखौं मानिसहरुको विच्छेदन गर्न; मौसम परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावहरूमा ... राम्रोसँग, तपाईंलाई थाहा छ हामी एक राष्ट्रको रूपमा हामीले सामना गर्ने सबै मुद्दाहरूको सूचीमा घण्टासम्म जान सक्छौं।
कुरा यो हो कि सार्वजनिक सेवामा यी मुद्दाहरूको सामना गर्ने रंगका पर्याप्त पेशेवरहरू छैनन्।
म यो कोठा वरिपरि हेर्छु र म यहाँ सबैको साथ चकित छु। तर स्पष्टसँग, मलाई लाग्दैन कि हामीमा पर्याप्त छ। खाँदाहरूमा पर्याप्त व्यक्तिहरू छैनन् जुन फरक दृष्टिकोण, फरक विचार, फरक जीवन अनुभवहरू छन् जुन हाम्रो देशका समस्याहरूको समाधानको लागि महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टि थप्न सक्छ। यस कोठामा व्यक्तिको संख्या, एकदम स्पष्टसँग, डबल वा ट्रिपल हुनुपर्दछ।
जबकि मलाई मनपर्दछ कि विल्सन स्कूलले यी साताको अन्त्यलाई परम्परा बनाएको छ। मलाई लाग्छ कि स्कूलले अधिक गर्ने समय आएको छ। यथास्थिति अब स्वीकार्य छैन। हामीले पाइपलाइनलाई दोब्बर र चौडा पार्नु पर्छ। हामीलाई सार्वजनिक सेवामा क्यारियरको अगाडि रंगका धेरै विद्यार्थीहरू आवश्यक छन्। हामीलाई MPAs को साथ स्नातक बढी विद्यार्थीको आवश्यक छ। हामीलाई चाहिएको अमेरिका निर्माण गर्न हामीलाई र color्गका पेसागत पेशेवरहरू चाहिन्छ।
तपाईंलाई थाहा छ, यस मुद्दामा जोडतोडले नयाँ छैन।
धेरै पटक, हामी विविधता र समावेशीको बारेमा कुरा गर्थ्यौं र यस स्कूलमा र color्गको बढी विद्यार्थीहरू प्राप्त गर्ने बारे। तर मेरो लागि यो गत जुन घर मा लाग्यो। म जून १ 18 को बिहान कामका लागि तयार भइरहेको थिएँ, जुन भयानकको बारेमा समाचार सुन्दै थिए चार्ल्सटन दक्षिण क्यारोलिना मा नौ व्यक्तिको नरसंहार। शुटि अघिल्लो दिन, AME चर्चमा साँझको प्रार्थना सेवाको क्रममा भयो।
चर्चका वरिष्ठ पादरी, रेभ। क्लेमेन्टा पिन्क्नी पनि मारिएकाहरूमध्ये थिए। म स्तब्ध थिए।
रेभ। पिन्क्नी पीपीआइ साथी थिए - हामीले सँगै कनिष्ठ ग्रीष्मकालीन संस्थान कार्यक्रम गर्‍यौं। उनी दक्षिण क्यारोलिनाका राज्य प्रतिनिधि बने र पछि राज्य सिनेटर भए। ऊ मारियो जब उनी केवल years१ वर्षका थिए। यति कम उमेरमा उसले धेरै गर्यो। स्पष्टतया, ऊ एक दौड को युद्ध प्रज्वलित गर्न गोली हानी मारियो। तर उनको मृत्युले अन्ततः दक्षिण क्यारोलिनाको कन्फेडेरेट झण्डालाई तल झार्न उत्साहित गर्‍यो, जुन नस्लवादीहरूको लाजमर्दो प्रतीक हो।
आजको बाउलमा हुँदा मैले कम्ले जहाँ बस्न खोजेको थिएँ, उसको सहज हाँसो र गहिरो आवाजलाई सम्झेर। हामीले १ 199 199 of को ग्रीष्म bowतुमा ती प्यालाहरूमा १० दयनीय हप्ताहरू बितायौं। र त्यहाँ उसको बारेमा सोच्दै गरेको थियो, त्यस कोठामा कम्तिमा एक क्षणको लागि यसले मलाई आशा प्रदान गर्‍यो। आशा छ कि यस संसारमा हाम्रो जीवनको काम साँच्चिकै परिणामदायी हुन सक्छ।
हामीले क्लेमलाई सम्झनु पर्छ र उसको जीवनलाई सम्मान गर्नु पर्छ।
मेरो दृष्टिकोणमा, त्यो राष्ट्रको सेवामा जीवन बिताउनुको मतलबको वास्तविक उदाहरण हो। अमेरिकालाई क्लेम जस्ता धेरै व्यक्ति चाहिन्छ। र म विश्वास गर्दछु कि विल्सन स्कूलसँग विश्वको क्लेमेन्टाज पत्ता लगाउन र तालिम दिन अझ धेरै काम गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व छ ताकि हामी हाम्रो देशको समस्याहरू समाधान गर्न वास्तविक शट पाउन सक्दछौं।
द्वारा फोटोग्राफहरू: क्याथरिन एल्गिन फोटोग्राफी